आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम म्याद, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम म्याद, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज कार्यालय समय भित्र यो आइपीओमा आवेदन दिन पाइने छ । आरम्भले फागुन १५ गतेदेखि १०० रुपैयाँ दरको २ लाख ९४ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यसमध्ये ८ हजार ८२० कित्ता (३%) सेयर कर्मचारी र १४ हजार ७०० कित्ता (५%) म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी २ लाख ७० हजार ४८० कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको हो ।
लगानीकर्ताले आस्वा सदस्य सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजीको ४९% आइपीओ बिक्री गरेको हो । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइसी एसिया क्यापिटलले गरेको छ । आइपीओ बिक्रीपछि आरम्भको चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।